Warsangeli/Dubeys iyo Raxanweyn argagaxisada Puntland?!.
Yuusuf Cali Aadam
HomePuntlandWarsangeli/Dubeys iyo Raxanweyn argagaxisada Puntland?!.
Yusuf Cali March 08, 2021
Labadan qabiil waxay ka siman yihiin in loogu xadgudbay sharaftooda, maalkooda iyo dhiiggooda deegaannada Puntland.
Warsangeli/Dubeys waa reerka deegaanka labada albaab ee magaalada buuraha dhexdoodda ku taalla ee Boosaaso Ceelaayo iyo Laag labadaba waxaa deegaan u yihiim tolka Dubeys ee Warsangeli.
Raxanweyn intooda badan waxay magaalada Boosaaso yimaadeen kadib burburkii dalka Soomaaliya, waa xoogsato sharaf leh, dad shaqo oo aad u yaqaan sida shillinka god kasta looga soo saaro. Puntland guud ahaan gaar ahaan Boosaaso waxay kala kulmaan faquuq iyo sinji cay.
Labada reer, midna waxaa lagu bartilmaameedsan ganacsigooda iyo horumarka ay sameeyeen iyagoo deegaankoodii ka dheer, halka mida kalena u ku socdo barakicin dhulleed; iyadoo loo dig iyo dam leeyahay khayraadka dabiiciga ah iyo macdanta ka buuxdo dhulkooda.
Argagaxiso ayaa laga baadi-goobaya beeraleey, bakhaarleey iyo bagaashleey, iyadoo aan loo tegi karin kooxaha Daacish iyo Alshabaab ee saldhigyada ku leh deegaannada u dhow Qandala, Baargaal, Xaafuun, Dhuudo iyo Bender Bayla iqkb, sababtuna wax kale maaha ee kuwaasi waa Majeerteen ama Saleebaanno.
Soomaalidu waxay tiraahda "Ishiisa laga arkaa ushiisa lagu tumaa!", mar kalena waxay tiraahda "Miskiin baa Misko la fuulo leh!"
- Yusuf Cali Aadam
Posted by Yusuf Cali
Commentator of the Somali Politics
Tweets by iamsomali
Waa maxay MIDGAAN (Boon)
Yusuf Cali March 09, 2010
Saddex u dhig dhig ka mid ah ummadda Soomaaliyeed waxay ku jiraan gumaysi iyo cad…
Diinta Islaamka Iyo Gudniinka
Mowduuc ku Sabsan Guurka
Waa Maxay Afgembi?
Guurka Ilhaam Cumar Iyo Tim Mynett.
Tacsi - Shiiykh Maxamuud Huruuse Eebbe ha u raxmadee.